पहिलो कोरोना संक्रमित नर्सको भोगाइ : ‘पोजेटिभ’ देखिनु नै अचम्म ! सिटामोल नखाई निको
वैशाख अन्तिम साता । तराईको बढ्दो गर्मी । गर्मीसँगै कोभिड–१९ को ‘हटस्पर्ट’ बनेको कपिलवस्तु जिल्ला । वैशाख ३० गते कपिलवस्तु अस्पताल तौलिहवामा कार्यरत नर्सको ‘रोटेसन’मा बिदा परेको थियो ।
सोही दिन विश्व नर्सिङ दिवस पनि परेकाले अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले एउटा सामान्य कार्यक्रम गरी नर्सिङ दिवस ‘सेलिब्रेट’ गरे । नर्सिङ दिवस मनाएर दिउँसो घरमा पुगेर हातको मोबाइल टेबुलमा के राखेकी थिइन्, अस्पतालबाट फोन आयो ।
टेलिफोन गर्नेले भने – ‘सिस्टर’ तपाईलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो सर्तर रहेर बस्नुहोस् है !
उनी अचम्ममा परिन् । उनलाई विश्वास नै लागेन । कसरी मलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखियो ? अस्पतालमा सँगै काम गर्ने चिकित्सकलाई फोन गरिन् । चिकित्सकको जवाफ पनि त्यहीँ आयो – तपाईको रिपोर्ट पोजेटिभ छ । अन्ततः रिपोर्टले नै देखाएपछि स्वास्थ्यकर्मीको नाताले उनले विश्वास गर्नैपर्‍यो ।
कपिलवस्तु अस्पताल तौलिहवामा कार्यरत कपिलवस्तु नगरपालिका–१ तौलिहवाकी २५ वर्षीया ती नर्सले न कतै क्वारेन्टाइमा गएर कसैको स्वाब संकलन गरेकी, न त कोही कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकी । उनी मनमनै गमिरहिन् तर जिल्लामा भने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको थियो । उनी नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित नर्स हुन् ।
शुरूमा उनलाई केही डर लागेजस्तो भयो । केहीबेरमै उनले आत्मबल बलियो बनाए कोरोना जितिन्छ भन्ने सुनेकी/पढेकी पनि थिइन् । उनी आफैं स्टाफ नर्स भएकाले के–के गर्नुपर्छ भन्ने आफैंलाई पनि ज्ञान थियो ।
उनी सोमवार १४ दिनमै कोरोना जितेर घर फर्किएकी छन् । उनी अस्पताल पनि हिँडेर जाने गर्थिन् । उनको घरदेखि अस्पताल पैदल १० मिनेटमा हिँडेर पुगिन्छ । तौलिहवा अस्पतालमा विगत ५ वर्षदेखि कार्यरत थिइन् उनी ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि धेरै अस्पतालमा बहिरंग सेवा (ओपीडी) बन्द भएकाले अस्पतालमा बिरामीको चाप थियो । जिल्लामा संक्रमण बढ्दै गएपछि अस्पतालले उनीसहित ५ जनाको स्वाब (थुक र खकार) संकलन गरी वैशाख २७ गते परीक्षणका लागि पठाएको थियो । वैशाख ३० गते उनको रिपोर्ट मात्र ‘पोजेटिभ’ देखियो ।
कोरोना देखिएपछि उनी अन्य कोरोना उपचारका लागि बनाइएका आइसोलेसन सेन्टरमा गइनन् । आफू कार्यरत अस्पतालकै एउटा खाली कोठामा ‘आइसोलेट’ भएर २ हप्ता बिताएर उनी सोमवार घर फर्किएकी हुन् । ‘कोरोना केही होइन । सजिलै जितिन्छ । म एउटा सिटामोल पनि नखाइकन कोभिड–१९ जितेर घर फर्किएँ,’ उनले भनिन् ।
आफूलाई कहाँबाट कोरोना संक्रमण भयो भन्नेबारे निको भएर घर गइसकेपछि पनि उनले पत्तो पाएकी छैनन् । उनले थपिन्, ‘मलाई कोरोना देखिएपछि मेरो घरका सबै जना, अस्पतालमा मेरो सम्पर्कमा रहेका चिकित्सक, नर्स र बिरामीको गरी ११० जनाको स्वाब संकलन गरी जाँच गरियो । उनीहरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो तर कहाँबाट मलाई पोजेटिभ देखियो, त्यो अचम्मको विषय भयो ।’
अस्पताल बसाइको अवधिभर उनमा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखिएन । जेठ १ र ४ गतेको स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । ‘मेरो रिपोर्ट १२ दिन अगाडि नै नेगेटिभ आएको थियो तर १४ दिन ‘आइसोलेट’ भएर बस्नुपर्छ भनेर म अस्पतालमै १४ दिन बिताएँ । अबको २ हप्ता ‘होम क्वारेन्टाइन’मा बस्छु,’ उनले भनिन्, ‘मलाई आइसोलेनमा बस्दा पनि दिन कटाउन समस्या भएन । इन्टरनेट थियो । भिडियो हेरें । समाचार हेर्ने, पढ्ने गरे । परिवारसँग कुराकानी पनि गरिरहें ।’
‘हाई प्रोटिन डाइट’ खाएर कोरोना सजिलै जित्न सकिने उनले बताइन् । ‘माछा, मासु, गेडागुडीको झोल लगायत प्रोटिनयुक्त खाना खाने र तातोपानी पिएँ कोरोना भाइरसलाई जित्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । बुवा, आमा, भाइ र उनी गरी उनको ४ जनाको परिवार छ ।
उनी नेपालगञ्जको भेरी नर्सिङ कलेजबाट स्टार्फ नर्स उत्तीर्ण गरी ५ वर्षदेखि घरपायक परेको कपिलवस्तु अस्पतालमा कार्यरत छिन् । कलिवस्तुमा कोरोना संक्रमितको सख्या ८० जनाभन्दा बढी छ ।